अमेजनमा किन Ban Amazon२ केरा ह्याgers्गरहरू छन् Martech Zone
अमेजनमा Ban 542२ केरा ह्या Han्गरहरू किन छन्
अमेजनमा 542 5.57२ विभिन्न केरा ह्याn्गरहरू छन् ... in .384.23..XNUMX देखि $ XNUMX$XNUMX.२XNUMX सम्मको मूल्यमा। सब भन्दा सस्तो केला ह्याn्गरहरू साधारण हुकहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो क्याबिनेटरीको मुनि माउन्ट गर्नुहुन्छ। सब भन्दा महँगो केरा ह्याn्गर यो सुन्दर हो Chabatree केला ह्याn्गर त्यो हस्त-शिल्प गरिएको छ र टिकाऊ काठ स्रोतहरूबाट बाहिर बनाइएको हो।
गम्भीरतापूर्वक ... मैले तिनीहरूलाई हेरेँ। मैले परिणामहरू गणना गरे, मूल्य अनुसार क्रमबद्ध, र एक टन गरे केरा ह्याn्गर अनुसन्धान।
अहिले नै, तपाईं सोध्दै हुनुहुन्छ ... यसले मार्केटिंग टेक्नोलोजीसँग के गर्नुपर्दछ… के तपाईं जानुभएको छ? केले? (हो, मैले भनें!)
होईन, यो केवल एक सरल लेख हो जुन उत्पादन नवीनता, उत्पाद छनौट, र मानिएको मान - साथै कसरी आफूलाई बजार गर्ने, तपाईंको उत्पादनहरू र तपाईंको सेवाहरू। यो पनि कसरी छ, व्यवसायको रूपमा तपाईले आफ्नो अर्को समाधानको लागि खोजीलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
एक केरा ह्याn्गरको एक उद्देश्य र एक उद्देश्य मात्र हुन्छ ... केरालाई झुण्ड्याउनको लागि ताकि तिनीहरू सतहमा बस्न सक्दैनन् र सजिलै डस्न सक्छन्। अचम्मको कुरा, यो प्याटेन्ट केवल २० वर्ष पुरानो हो। साइड नोट ... आविष्कारक ब्रुस आन्कोनाले पनि कागज तौलिया होल्डरलाई पेटन्ट गरे… र यस्तो सामान मान्छे जस्तो देखिन्छ कि सामान कहाँ राख्ने भन्ने सोचमा भान्साकोठामा धेरै समय खर्च गर्दछन्। फेरि केरा ह्याn्गरहरूमा फर्कनुहोस्, यद्यपि ...
पछिल्ला दुई दशकहरूमा, केरा ह्याnर ब्रुसले पेटेन्ट त्यहाँ राख्दा पछाडि फर्केर भन्दा कुनै नयाँ कुरा भएको छैन। बजारमा प्रत्येक केरा ह्याn्गरको उही उद्देश्य हुन्छ ... तपाईंको केलेको चोटलाई सुस्त पार्न। अर्को शब्दहरुमा, मूल्य ह्यान्जरको परिवर्तन भएको छैन। यसले तपाईंको बनाना बीस बर्ष भन्दा पहिले लामो केहि हप्ता बनायो ... र यसले तिनीहरूलाई आज उस्तै बनाउँछ।
त्यसोभए किन व्यक्तिहरू उनीहरूका लागि बिभिन्न मूल्य तिर्ने छन्? किनभने प्रत्येक किनमेल गर्नेको लाग्ने मान फरक छ। केही व्यक्तिलाई केरा ह्याnरको सुविधा चाहिन्छ जसले काउन्टर स्पेस लिदैन, त्यसैले उनीहरूले अन्डर-काउन्टर मोडेललाई भुक्तानी गर्नेछन्। अरूले अन्य फलको लागि कचौरा संलग्नकको सराहना गर्छन्। अरूले सामग्री र सम्भावनाको आधारमा भुक्तान गर्नेछन् जुन उनीहरूको घरमा राम्रो देखिनेछ। र ... अझै पनि, अन्यले $ 384.23.२XNUMX को भुक्तानी गर्नेछ टिकाऊ उत्पादनहरू र स्थानीय कारीगर जसले तपाईंको भान्छाको लागि कलाको एक टुक्रा बनाएको छ।
जब तपाइँ तपाइँको उत्पादनहरु वा सेवाहरु को बारे मा सोच्नुहुन्छ, तपाइँ एक उत्पादन वितरण छैन कि तपाइँको ग्राहकलाई कुनै अधिक वा कम मूल्य प्रदान छैन। यसैले यो बुझ्नको लागि एकदम आलोचनात्मक छ तिनीहरूले तपाईंको उत्पादन वा सेवालाई कसरी महत्त्व दिन्छन्। कहिलेकाँही, तिनीहरूलाई सिकाउनु आवश्यक पर्दछ किन तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरू तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा बढी (वा कम) महँगो हुन सक्छ। सबैजनाले फरक केरा ह्याn्गर बनाउँदछ।
मसँग मेरो एक साथी छ जुन धेरै वर्षसम्म स्टार्टअपको सीईओको रूपमा काम गर्‍यो। ऊमा पर्ने तनाव असह्य थियो। उनीसँग हरेक दिन लगानीकर्ताहरू दबाब दिन आएका थिए, ग्राहकहरू नयाँ सुविधाहरूको लागि धक्का दिइरहेका थिए, विकासकर्ताहरू जुन अन्य कम्पनीहरूबाट भर्ती भइरहेका थिए, र उसको आम्दानी गम्भीर थियो किनकि उनले सबै टुक्रालाई सँगै राख्न र आफ्नो नवीन दृष्टिकोण विकास गर्न खोज्दा। उसको व्यवसाय असफल भयो किनकि ऊ अन्ततः कोषहरू ओझेलमा पर्थ्यो र वितरण गर्न आवश्यक प्रतिभालाई भाडामा लिन सक्दैन।
वर्षौंपछि, मैले उनलाई कफीको लागि भेटे र उनलाई के गरिरहेको थिएँ भनेर सोधें। उसले उत्तर दियो कि ऊ अहिले लन घाँस काट्ने कम्पनीको हो। उनले लानको घाँस काट्ने कामबाट अब धेरै दलहरू चलाउन थालेको थियो। ऊ विस्मयकारी गर्दै थियो, थोरै तनावमा थियो, बाहिर काम गरेको थियो, र मन पराउँथ्यो।
म स्तब्ध भएकी थिएँ ... अन्वेषक र टेक स्टार्टअप उद्यमी देखि लन घाँसे सम्म?
उनको प्रतिक्रिया, घाँस बढ्दै जान्छ.
उसले अहिले राम्रो गरिरहेको छ र उसको व्यवसाय फस्टाउँदैछ। अर्थव्यवस्थाको बावजुद, लगानी समुदाय, सरकारी नियमन, र प्रतिस्पर्धा… घाँस बढ्दो रहन्छ र उसले एक गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने बित्तिकै सम्बन्ध निर्माण गर्न र बढाउन सक्षम छ। केही नयाँ छैन, केवल कडा परिश्रम प्रदान गर्दै छ र समस्याको राम्रो नतिजा छ जुन हामीले एक शताब्दीदेखि गर्दै आएका छौं।
वास्तवमा, हामी एउटा इन्टर्प्राइज प्लेटफर्म स्पेसमा काम गर्छौं जहाँ मुख्य खेलाडीहरू नयाँ उत्पादनहरू र सुविधाहरू प्राप्त गर्न र एकीकृत गर्न कडा मेहनत गरिरहेका छन्, कि तिनीहरूका मुख्य सुविधाहरू उद्योगमा पछाडि छन्। तिनीहरू बिक्री बढाउन अर्को ठूलो चीजको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै छन्, जबकि तिनीहरूका ग्राहकहरूले तिनीहरूलाई उत्तम समाधानको लागि छोड्दैछन् जुन प्राय: भन्दा कम खर्चिलो हुन्छ।
एक सफल व्यवसाय संचालन गर्न नवीनता जहिले पनि आवश्यक छैन।
त्यहाँ केरा ह्याn्गरहरू प्रशस्त छन्। जबकि केहि क्याबिनेटबाट झुण्डिएका छन्, केहिले फल फलाउँदछन्, र ती सबैमा केही फरक देखिन्छन् ... तिनीहरू सबैले समान चीज गर्छन्। तर, उपभोक्ताहरूको पर्याप्त मांग छ कि यी सबै व्यवसायले बजार पहिचान गरे र त्यहाँ तिनीहरूको समाधान बेच्न थाले।
तपाईंको व्यवसाय फरक छैन। त्यहाँ अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादनहरू र सेवाहरू छन् जुन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले अझ राम्रो गर्न सक्छन्। यसको मतलब यो हो कि, एक बजारको रूपमा, तपाईंले आफ्ना श्रोताहरूलाई उनीहरूको लागि उचित किन उपयुक्त हुनुहुन्छ भनेर शिक्षा दिन सक्षम हुनु आवश्यक छ। र यो पनि किन हो, बजारको रूपमा, तपाइँले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाइँको उद्योगमा तपाइँको अधिकारलाई क्रेताहरूको रूपमा तपाइँको व्यवसायको अनुसन्धान गर्न ती उत्पादनहरू र समाधानहरू प्रदान गर्ने क्षमताको रूपमा मान्यता प्राप्त छ।
मान्छेहरूले एक केन्डा ह्याnगर किन्छ वा अमेजनमा अर्को खरिद गर्दछ भन्ने भिन्नता केरा ताजा र प्रजनन रहनको साथ केहि गर्नुपर्दैन ... तिनीहरू सबैले त्यसो गर्छन्। भिन्नता रेटिंग्स, समीक्षा, वर्णन, र उत्पादनको डिजाईनमा हो। एक मार्केटरको रूपमा, जहाँ तपाइँ तपाइँको समय खर्च गर्न को लागी - प्रभावकारिता मार्केटिङ तपाईंको उत्पादन र सेवाहरू ... रेटिंग्स, समीक्षा, वर्णन, र तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको डिजाइन।
मार्केटिंगको राम्रो काम गर्नुहोस्, र तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू र सेवाहरू चाहने ग्राहकहरूसँग जडान गर्नुहुनेछ।
डिजिटल मार्केटिंग उत्पादन र सेवाहरू
डिजिटल मार्केटिंग समुदायमा, हामीसँग अर्को चाँदीको बुलेट प्लेटफर्म वा च्यानल खोज्ने हाम्रो भयानक बानी छ जुन हाम्रो सबै समस्याहरूको समाधान गर्न गइरहेको छ। तर केहि सब भन्दा लाभदायक र उच्च बृद्धि टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले वास्तवमै केही पनि आविष्कार गरेनन्। तिनीहरूले भर्खरै माग देखे र मार्केटको उत्तम तरिका विकास गरे कि तिनीहरू उत्तम मानको लागि उत्तम समाधान हुन्।
तपाईं कहिँबाट पनि पुस्तकहरू किन्न सक्नुहुनेछ, तर अमेजनले बन्द गर्‍यो। तपाईं कहिँबाट पनि जुत्ता किन्न सक्नुहुनेछ, तर Zappos ले टेक्यो। तपाईं कुनै पनि प्लेटफर्मको साथ एक वेबसाइट निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, तर WordPress बन्द भयो। म सयौं वा हजारौं उदाहरण सूचीकृत गर्न सक्दछु।
म भन्दै छु कि यी कम्पनीहरू नवीन छैनन् ... मँ केवल औंल्याउँदै छु परिणामहरू उस्तै छन्। तपाईंले पुस्तक प्राप्त गर्नुभयो, जुत्ताहरू प्राप्त गर्नुभयो, वा तपाईंले वेबसाइट सुरू गर्नुभयो। म विश्वास गर्दछ कि भोल्यूम, मान्यता, र वृद्धि उनीहरूको व्यवसायमा आयो ... त्यसो भए पछि उनीहरूले स्रोतहरू वहन गर्न सक्नेछन् वास्तविकताले नवीनतामा लगानी गर्न।
तपाईंको व्यवसाय 'मूल्य र नवीनता
जब तपाईं आफ्नो उद्योगलाई हेरिरहनु भएको छ, यसको जवाफ नहुन सक्छ कि तपाईं केही नयाँ चीज कसरी गर्नुहुन्छ वा प्रतिस्पर्धी सेवा पनि प्रदान गर्नुहुन्छ जुन कम खर्चिलो छ।
उपभोक्ताहरू र ब्यापारहरू सबैको समस्याहरू हुन्छन् र उनीहरू हरेक दिन सामना गरिरहन्छन् जुन केवल समाधान चाहिन्छ। चाहे यसले उनीहरूको केरालाई झुण्डिरहेको छ, वा यसले तिनीहरूको लेखन, डिजाइन, अनुमोदन, र तिनीहरूको अर्को न्यूजलेटरको लागि प्रकाशन प्रक्रिया स्वचालित गर्दैछ। समस्या अवस्थित छ, तिनीहरूको निराशा अवस्थित छ, र उनीहरूले पहिले नै समाधानको मूल्य बुझ्दछन्।
तपाइँलाई एक थप सुविधाको आवश्यक पर्दैन, अर्को इनोभेसन, वा फरक मूल्य पोइन्ट यदि माग अवस्थित छ र मान पहिचान भयो भने। मुख्य समस्यामा तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् तपाईंको उत्पादनहरू र समाधानहरूको लागि समाधान प्रदान गर्दछ।
तपाईंले खोजिरहनु भएको समाधानको नवीनता र मूल्य
हामी अहिले नै एक व्यवसायको साथ काम गर्दैछौं कि यसको उत्पादनहरू फुटबल आउटलेटहरूमा शुद्ध सेतो लेबल गरिएको। महामारी, लकडाउनहरू र त्यसपछिको खुद्रा पछाडि उनीहरूले सीधा-उपभोक्ता ई-कॉमर्स विकल्प समावेश गर्न आवश्यक देखे। धेरै प्राविधिक जानकार नभएको कारण उनीहरूले समाधानहरू पत्ता लगाए र विभिन्न वाणिज्य प्रदायकहरूमा बिक्री प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्न थाले।
सबै सम्भावनाहरू हेरेपछि, तिनीहरूले यसलाई सीमित बनाए बजारको उत्तम समाधानमा। यसले असीमित रूपमा स्केल गर्न सक्थ्यो, बहु-भाषा समर्थन प्रस्ताव गर्‍यो, असंख्य इन्टिग्रेसनहरू थिए, अन्तर्राष्ट्रिय कर गणनाहरू थिए, निर्मित एआई इञ्जिन थियो र लाखौंलाई ह्यान्डल गर्न सक्थ्यो। SKUs। तिनीहरू बेचिएका थिए ... सयौं हजारौं इजाजतपत्रमा लगानी गर्न तयार छन् र अधिक हामीलाई समाधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि भर्ती गर्न र यसलाई विश्व-स्तरीय मार्केटिंग प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्न अझ बढी।
हामीले त्यसलाई बाहिरबाट कुरा गर्यौं।
यो ग्रहमा सबै भन्दा राम्रो, सबै भन्दा राम्रो समाधान हुन सक्छ, यो सम्भवतः तिनीहरूलाई दिवालिया गर्न वा ड्राइभ गर्न को लागी थियो वा तिनीहरूले लगानीमा फिर्ताको लागि एक दशक पहिले। तिनीहरूसँग केवल products 75 उत्पादनहरू थिए ... ईकमर्स प्लेटफर्मको लागि ह्यान्डल गर्नका लागि pitance। र तिनीहरू केवल संयुक्त राज्य अमेरिका मा पहिलो वर्ष वा त को लागी बेच्ने थिए। चाँदीको गोलीले उनीहरूलाई मार्दैछ।
हाम्रो सल्लाह, यसको सट्टा, अनुसन्धान र ब्रान्डि inमा लगानी गर्नु थियो, त्यसपछि एकीकृत मार्केटिंग अटोमेसन प्लेटफर्मको साथ सरल, अफ-द-शेल्फ समाधान लागू गर्नुहोस् जहाँ हामी उनीहरूको उत्पादनहरूको बढ्दो जागरूकता र ड्राइभि sales बिक्रीमा केन्द्रित गर्न सक्दछौं। तिनीहरूलाई केवल नियमित ओल 'केरा ह्याn्गर चाहियो ... अरू केहि छैन।
जब तपाईं आफ्नो व्यवसायलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको संगठन भित्रका पीडा पोइन्टहरू पहिचान गर्न जहाँ टेक्नोलोजीले तपाईंलाई बढी प्रभावकारी र बढी सक्षम हुन मद्दत गर्न सक्दछ महँगो वा नवीन समाधानको आवश्यकता पर्दैन। यो शाब्दिक रूपमा एक सफ्टवेयर प्लेटफर्म हुन सक्छ जुन अर्क गर्दछ, रूपान्तरण गर्दछ, र डाटा लोड गर्दछ जसले तपाईंलाई सडकमा अन्य अनगिन्ती घण्टा बचत गर्दछ।
तपाइँको ग्राहकहरु संग उही विश्लेषण प्रदर्शन गर्नुहोस् ... तिनीहरूको निराशा र खाली ठाउँहरू कहाँ छन् कसरी तपाइँ उनीहरूलाई सेवा दिन सक्षम हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई खुशी राख्न?
समाधान दुबै सस्तो र गैर-टेक्निकल हुन सक्छ। त्यहाँ एउटा कारण छ कि त्यहाँ अमेजनमा 542 XNUMX२ केरा ह्याn्गरहरू छन् ... त्यहाँ धेरै मानिस छन् कि उनीहरू खरीद गरिरहेका छन् र कम्पनीहरूको समूहले मागहरू पूरा गर्नमा राम्रो गरिरहेछन्। र मूल्यहरू ग्राहकले देखेको मूल्यमा आधारित हुन्छन्।
टैग: अमेजनकेरा ह्यान्गरहरूमानिएको मानउत्पादन छनौटउत्पाद नवीनताउत्पाद मार्केटिंगउत्पादन समीक्षाहरूउत्पाद मानमूल्य